I-Raw Dyclonine HCL powder (536-43-6) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Dyclonine HCL powder
SKU: 536-43-6. Udidi: abanye
I-AASraw ihamba kunye nekhono lokuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Dyclonine HCL powder (536-43-6), phantsi kolawulo lwe-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Dyclonine Hydrochloride yi-hydrochloride ityuwa ye-Dyclonine, i-compound engekho phantsi kunye nefuthe le-anesthetic yendawo. I-Dyclonine iyayibophelela ekusebenziseni imigudu ye-sodium kwi-membrane ye-neuronal, ngaloo ndlela iyancipha i-neuronal memmane yokubangela ukuba i-sodium ions, ekhokelela ekungenikeni kwenyusa.
Dyclonine HCL anesthesia powder ividiyo
I-Raw Dyclonine HCL i-anesthesia powder esisiseko Abalinganiswa
igama: Dyclonine HCL
I-molecular Formula: C18H28ClNO2
Isisindo somzimba: 325.87
I-Raw Dyclonine HCL i-anesthesia yokusetyenziswa kwe powder
Amagama e-Dyclonine HCL
I-Dyclonine HCL iphinde ibhekiswe kwiDyclonine hydrochloride.
I-Dyclonine HCL yokusetyenziswa kwePowder
①Sebenzisa ukuphelisa intlungu yezilonda zesisu; I-5-15 mL ye-0.5% isisombululo se-dyclonine inokuginywa njengoko kuchaziwe.
②Vumela ukudibanisa namehlo okanye iinkophe. Kwakhona ugweme izicelo kwiindawo ezinkulu.
③Store kwi-15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) kwisitya esomeleleyo, esingaqinekiyo ngaphandle kokuba sichazwe ngenye indlela.
Isilumkiso kwiPyclonine HCL powder
Uvavanyo kunye nemiphumo yeziyobisi
①Unganiki isigulane nantoni ngomlomo ngaphakathi kwe-60 min (de ukubuyela kwegag reflex) emva kokulawulwa kweziyobisi. Imithi ingaphazamisa isigaba sesibini sokugwinya xa sisetyenziswe ngomlomo.
②Kuphawu lwe-gag reflex ngokunyamezela ngokukhawuleza nge-cotton swab (ngelixa uqhuba ulwimi phantsi komxinzelelo). Ukuba isigulane asiyonto okanye siyagwinya, unganiki nto ngomlomo. Imfihlo yokuphumelela njengoko kuyimfuneko ukukhusela ukuthandwa.
Qaphela: Ukusetyenziswa kwamanzi acacileyo kufuneka kube yinto yokuqala yokugwinya xa i-gag reflex ibuya.
Umonde kunye neMfundo Yentsapho
①Ukukhusela ukukhutshwa kwegag reflex kunye nokukhusela okufanelekileyo UKUSETSHENZISWA KWEZINDAWO.
②Ungabi sisondlo sebele xa usebenzisa le nkunkuma ngaphandle kokubonisana nodokotela.
I-Dyclonine Oral Dental Rinse yi-anesthetic yama-topical in the form of a rinse ukuba izigulana zikwazi ukujikeleza ngeenxa yomzuzu omnye ukuya kwi-anesthetize gingival kunye nezicubu zomzimba. Ku luncedo kwizigulane zokucoceka ezifuna i-aneshesia kodwa azifuni ukuba uphakamise umlomo wazo ngenaliti ebukhali. Kuye kwaxelwa ukuba i-dyclonine iya kunceda isigulane esichukumisayo esichukumisayo ngexesha lokujonga.
I-Raw Dyclonine HCL powder
I-Raw Dyclonine HCL yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-Dyclonine HCL powder kwi-AASraw
I-Raw Dyclonine HCL powder Recipes: